Exploring policy solutions for the country
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ဝက်တုန်းက ကျောင်းမှာ Politics and Policy in South East Asia ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုယူတော့ အပါတ်စဉ်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီကျောင်းသားတွေက Presentation လုပ်ပြီး တဖွဲ့စီ ခေါင်းဆောင်ဆွေးနွေး ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း Presentation လုပ်မယ့်အုပ်စုထဲမှာ ကိုယ်မပါရပါဘူး။ သဘောက မြန်မာပြည်ကလူကို မြန်မာပြည်အကြောင်း Presentation ထဲမှာ မထည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ။ ၀င်ပြောလို့ တော့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာမြန်မာပြည်အကြောင်း တင်ပြတဲ့အဖွဲ့က မြန်မာသံရုံးကသံအမတ်ကြီးကိုသွားတွေ့ အင်တာဗျူးလုပ်လာတဲ့အပြင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းက စင်္ကာပူမီဒီယာတခုက (Channel News Asia လား။ Mediacorp နာမည်နဲ့လား အသေအချာမမှတ်မိပါ။) စင်္ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတချို့ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာတွေကိုပါ Youtube ပေါ်ကနေဆွဲပြီး တွဲတင်ပြလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာအင်တာဗျူးအလုပ်ခံရတဲ့သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေဆင်းရဲလွန်းလို့ တချို့လူတွေဟာ တလ US ၂ ဒေါ်လာအောက်ဝင်ငွေနဲ့ နေထိုင်စား သောက်ရပါသတဲ့။ ပြောတဲ့သူက အမှတ်တမဲ့ ရက်နဲ့ လကိုမှားပြောသွားတာလား။ အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လားတွေးမိပေမယ့် တခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်မှာ အရမ်းကိုဆိုးရွားသွားတဲ့ အနေအထား တခုပါ။ တွက်ကြည့်ပါ။ လူတယောက်ဟာ ဆန်ပြုတ်ချည်းပဲနေ့တိုင်းသောက်နေနိုင်ရင်တောင် တနေ့ ၂နပ်နဲ့တွက်၊ တနေ့ ၄၀၀ကျပ်လောက် အကြမ်းဖျင်းကျပါတယ်။ (ဒါတောင်ဆန်ပြုတ်ပဲသောက်ရရင် လူတယောက် ၂နပ်နဲ့မ၀နိုင်ပါဘူး) တလကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်။ အပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့ USD ၁၂ ၀န်းကျင်ကုန်ကျပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် လူတယောက်တလ US ၂ ဒေါ်လာနဲ့နေမလဲ။
နောက်တခါ သူကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ အခုစစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ နှစ် ၂၀အတွင်းမှာနိုင်ငံကဘာမှ တိုးတက်မလာပါဘူးတဲ့။ တိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတက်လာဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတတွေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေ၊ တိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေတွေနဲ့တွက်ရင် ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရတာအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝတိုးတက်မလာဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်အဲဒီ အင်တာဗျူးမှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်လောက်တုန်းက ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ လူတွေနေထိုင်သွားလာမှုပုံစံတွေကို ပြထားပြီး အနှစ်၂၀ကျော်အတွင်းမှာ ကူးသန်းသွားလာရေးကတိုးတက်မလာပါဘူးလို့ ပြောထားပါသေးတယ်။ ဒီနှစ် ၂၀အတွင်းမှာဆောက်ထားတဲ့ တံတားတွေ၊ ဖောက်ထားတဲ့ လမ်းတွေ အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ ပြောရင် ကျွန်မကိုစစ်အစိုးရအလိုတော်ရိလို့ လက်ညှိုးဝိုင်းထိုးကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကျွန်မအတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောတာပါ။ ကျွန်မတို့ပုသိမ် - ရန်ကုန်လမ်းမှာ အရင်တုန်းက ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားမရှိတဲ့အတွက် ရန်ကုန်သွားရင် ကားတွေကဇက်ကူးရပါတယ်။ ကားတွေကိုယ်တိုင်ကူးရင်ကူး။ မဟုတ်ရင် အများသုံးဘတ်စ် ကားတွေဆိုရင် ဒီဘက်ဆိပ်မှာလူတွေကဆင်း၊ ဇက်နဲ့ကူးသွားပြီး ဟိုဘက်ကမ်းမှာအသင့်စောင့်နေတဲ့ကားပေါ် ပြောင်းတက်ရပါတယ်။ အထုပ်အပိုးများတဲ့သူဆို အဆင်မပြေတဲ့ခရီးပါ။ ဒါ့အပြင် အသွားအပြန်ဇက် ၂စင်းလောက်ပဲရှိလို့စောင့်ရတော့ အချိန်ကြန့်ကြပါတယ်။ တခါတလေဆို ရန်ကုန်-ပုသိမ်ခရီးက ၈နာရီ ၉နာရီ ကြာပါတယ်။ အဲဒီတော့အလျင်မလိုတဲ့လူအများစုကတော့ သင်္ဘောနဲ့သွားပါတယ်။ ပုသိမ်ကနေ ညနေ ၅နာရီ လောက်သွားရင် နောက်နေ့မနက် ၉နာရီ ၁၀ရောက်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကစပြီး ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်-ပုသိမ်အသွားအပြန်ခရီးဟာ ၄နာရီပဲကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ပုံမှန်မောင်းရင် ၃နာရီ ခွဲအတွင်းရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအသစ်ဆောက်တဲ့ လမ်း၊ တံတားတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူလာပြီး အရင်ကထက်စာရင် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက် လာတဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိမှာပါ။ နယ်စပ်ဒေသတွေမဖွံ့ဖြိုးသေးတာ၊ တိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့နေရာတွေ ကျန်နေသေးတာလည်း လုံးဝအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်၂၀အတွင်းမှာ လုံးဝမတိုးတက်လာပါဘူးလို့ ခြေကန်ငြင်းရင်တော့ မျက်စိကန်းနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရလုပ်လို့တိုးတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြောင့်၊ Globalization ကြောင့် ဘာကြောင့်ပဲတိုးတက်တိုးတက်။ တိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေကိုတော့အသိအမှတ်ပြုစေချင်ပါတယ်။ (ဒီတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေရှိနေတာကတော့ နောက်ထပ်ပြဿနာတခုပေါ့။)
နောက်တခုကပိုပြီးကောင်းမွန်ပွင့်လင်းလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါ။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်က နိုင်ငံခြားကိုထွက်ခွင့်ရတဲ့ လူအရေအတွက်နဲ့ အခုစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အရေအတွက်ဘယ်ဟာကပိုများပါသလဲ။ အဲဒီတုန်းကမတိုးတက်သေးလို့၊ လူတွေကအမြင်မကျယ်သေးလို့လို့ မငြင်းပါနဲ့။ တံခါးပိတ်ဝါဒကြောင့်လည်း အများကြီးပါပါသေးတယ်။ ဒီစကားတွေကိုပြောနေလို့ စစ်အစိုးရလုပ်သမျှကောင်းနေတာပါလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရှိကိုအရှိအတိုင်းတော့ လက်ခံကြစေချင်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်မတို့အားကိုးနေတဲ့မီဒီယာ ၂ခုရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ ကြည့်နေ၊ နားထောင်နေရတဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မီဒီယာပါ။ နောက်ပြည်ပကနေပေါင်းစုံရေးသားနေကြတဲ့ မီဒီယာတွေပါ။ ၂ဘက်စလုံးကိုအစွန်းရောက်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာအမှန်အတိုင်းလွတ်လွတ် လပ်လပ်မရေးနိုင်၊ မပြောနိုင်ပဲ ဆင်ဆာကိုကြောက်နေရပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြ၀တီနဲ့ မြန်မာ့အလင်းတွေက အစိုးရလုပ်တာမှန်သမျှအကောင်းရေးပြီး သတင်းတွေကိုကွယ်ဝှက်ထားပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်ပမီဒီယာတွေက စစ်အစိုးရကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုယူထားပြီး စစ်အစိုးရလုပ်သမျှအပြစ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ စစ်အစိုးရလုပ်နေတဲ့အထဲက ဒီတခုကတော့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်မျိုးကိုမတွေ့ရသလောက်ရှားပါတယ်။ ကျွန်မအမြင်တော့ မီဒီယာဆိုတာအမြင်အတိုင်းတင်ပြရမှာပါ။ (သရော်စာတို့၊ သုံးသပ်ချက်တို့က တကဏ္ဍပေါ့။) အခုတော့ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေမှာ ဒီမီဒီယာကြည့်ရင် တမျိုး၊ ဟိုမီဒီယာကြည့်ရင်တမျိုး။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရုပ်လုံးဖော်တဲ့အနေအထားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို မြောက်ကိုရီးယားလောက်နီးနီးထင်သွားကြတာပါ။ ကျောင်းမှာ ကျွန်မတို့ကို ဥရောပဘက်ကလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကမေးကြပါတယ်။ နင်တို့ကစစ်တပ်နဲ့ဘာတော်လို့ အခုလိုအပြင်ထွက်ပြီး ပညာသင်ခွင့်ရတာလဲတဲ့။ ပြီးရင် မြန်မာပြည်ပြန်လို့ရရဲ့လားတဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင် လူတွေကဆင်းရဲစုတ်ပြတ်၊ လမ်းတွေကဆိုးဆိုးဝါးဝါး၊ လူတွေကကျီးလန့်စာစား၊ စစ်တပ်ကသေနတ်ကိုင်ပြီး နေရာတိုင်းလျှောက်သွားနေ အဲဒီလိုမျိုးကိုထင်နေကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မီဒီယာရော၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့မီဒီယာရော အရှိကိုအရှိအတိုင်းတင်ပြစေချင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာအခြေအနေက အခုအချိန်မှာပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခါ ပြည်ပမီဒီယာတွေက တကယ်ကိုပြည်သူတွေစိတ်ချ ယုံကြည်အားကိုးရလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာရင် အရမ်းကောင်းမှာပါ။
Last semester, I took the module called ‘Politics and Policy in South East Asia’ in which each group of students had to do presentation aboutacountry in SEA. But the native students fromaparticular country were not assigned for that country. For instance, the Malaysian students were not in the presenting group of Malaysia. On the week of Myanmar presentation, that group went to interview with Myanmar ambassador as well as attachedavideo from Youtube to their presentation. The video was an interview with some Myanmar workers in Singapore during Saffron Revolution (I don’t remember whether it is from the Channel News Asia or Mediacorp). The interview,amale worker, talking about the poverty of the population inside the country, mentioned that some people were so poor that they were living below the income of USD2per month. See, even ifaperson can only have congee everyday without any side dish, it will cost around 400 Kyats for two times per day and 12,000 Kyats (around USD 12 according the recent black market rate) per month. But it’s highly unlikely thataperson can eat congee every day. How canaperson live under USD2per month?
And then, he said that there had been no infrastructure development under this military government during past 20 years. The video included some snapshots of the buses and people travelling from the year of 1995 and claimed that the present situation remained the same. Okay, it can be acceptable if someone argues that there should have been more developments than there are at present, given the rich natural resources and increasing population. But I cannot accept this sentence of NO development. If I point out the numbers of roads and bridges built after 1988, people may accuse me of allying with the military government (SPDC). But it is the truth that people cannot deny. I have my person experience of having benefited fromabridge which is built on the road to the capital from my hometown, Pathein (Bassein). Previously before the construction of the bridge, it took around 8 or9hours to reach to the capital from my hometown. The Irrawaddy River is around the half way. The ferries were used to move people and cars to the other side of river bank. For the people using express buses, one bus had to wait from the other side and picked up the people. But the ones with heavy luggage were not that convenient to travel alone. If the ship journey was taken, it took the whole night from my hometown to the capital. So, only the people who were not that inahurry could take this route. After the Bo Myat Tun Bridge had constructed at that river crossing, the transportation improvedalot and it took only around4hours to travel between two cities. The private car can even make it in3hours. It surely improved the education, health, economic and social opportunities of the areas located along the new roads and near the new bridges. It is deniable that there still remains many places including border areas which needaserious care for development. But still, we cannot neglect the fact that we can see quite amount development efforts during these years. (Corruption related to these efforts is another issue.) We need to acknowledge the certain things if they are true.
Another thing is the increasing opportunities. Comparing with the Socialist Era of General Ne Win, there have been more people who can go out of the country for education and economic opportunities. Be there it is globalization or whatever the reason is; we need to know the difference between the closed-economy and open policies.
Myanmar people have basically two kinds of media. The first one is the government-managed media inside the country. This one talks about the government actions from the bright side. Other mistakes, policy errors, corruption and hideous crimes are hidden. The second one, the collective media from outside of the country, talks only about the dark side of the military government. Most of the media from the outside are anti-military regimes and politically biased. Hence, they do not clap even when the government is doing something positive. Both of them are at two extremes. For the common public, it’s very confusing to have two media which have two very different directions. And the foreigners and people who have never been to Myanmar only have access to these foreign and out-country online media. They thought of Myanmar as the second North Korea which closed everything. Some of them even imagined the Myanmar people being so poor, the bad transportation, and the soldiers holding the guns and walking around the streets. In my school, people, especially from Europe and the West, asked me whether I had some relation with the military or whether I came from elite family in Myanmar as I could come out and study inaforeign country. I am not here talking about to say that these media from the outside of the country are bad, or even worse than the one inside the country. BUT, we need the transparency to inject into the media. Please have the balanced news for constructive ideas and views on what the government is doing as well as the mistakes. And please also have the feasible recommendations to the government. Given the current critical situation, the government-managed media will not change inashort while. So, I wish we, Myanmar people, could rely on the out-country media for the sources of the news. I wish that these media can provide the transparent and politically-neutralized news which is also of the real source.
Posted by Haymar at 9:49 PM 1 comments
ကျွန်မ Human Right ဆိုတာကိုသေသေချာချာ မလေ့လာရသေးပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာလောက်ပဲ သိပါတယ်။ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ လူတယောက်ကအခွင့်အရေးရှိသလဲ။ နောက်တခါ လွတ်လပ်ခွင့် Freedom ဆိုတာကရော။ လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကရော ဘယ်အတိုင်းအတာထိပါလဲ။ ကျွန်မနားလည်းထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကတော့ သူတပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပဲ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တာကို ရအောင်ယူတာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကလည်း သူတပါးကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘောင်တခုထဲကနေ အချုပ်အနှောင်မရှိနေထိုင်ခွင့်ရခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘောင်၊ စည်းဆိုတာ ရှိလာပြီ ဆိုမှတော့ ဘယ်လိုလုပ်လွတ်လပ်ပါမလဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့၊ အုပ်ချုပ်မှုဘောင်မဲ့ လွတ်လပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေနဲ့ရောနေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တောထဲသွားနေဖို့သာ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ တောမှတောင် မလုပ်ရဆိုတဲ့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရင် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ကျွန်မဘွဲ့လွန်ဆက်မတက်ခင်အထိကျွန်မသိထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့လူ့ဘောင်ဆိုတာတော်တော်လေးကို ကျဉ်းမြောင်းနေပါသေးတယ်။ ကျွန်မဇာတိမြို့ကလေးမှာဆိုရင် တယောက်နဲ့တယောက် လေးစားရပါတယ်။ လူကြီးတွေကိုနာခံရပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် ဘယ်လိုနေနေဆိုလို့ မရပါဘူး။ အခုအချိန်အထိလည်း ကျွန်မနှစ်သက်၊ မှတ်မိနေသေးတဲ့ အလေ့အထလေးတွေထဲက တချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အိမ်တအိမ်မှာဆီသတ်တာမျိုး၊ ညှော်နံ့ထွက်မယ့်ဟင်းလျာ တခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် “ညှော်တော့မယ်နော်” လို့ပြောကြပါတယ်။ မတတ်သာလို့လုပ်ရတယ်၊ လေလုံတဲ့အိမ်မျိုးတွေလည်းမဟုတ်တော့ ညှော်နံ့ထွက်လာရင်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူ၊ အနံ့အသက်မခံနိုင်တဲ့သူရှိရင် ကြိုရှောင်ထားနိုင်အောင်၊ မလှုပ်ရှားနိုင်ရင်လည်း ခြင်ထောင်ထဲမှာနေတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ်၊ ကာကွယ်နိုင်အောင် ကြိုတင်သတိပေးတာပါ။ ပြီးတော့ အိမ်တွေမှာကက်ဆက်ဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၃နှစ်သမီးကတည်းက အဘိုးနဲ့နေခဲ့ရတာပါ။ အဘိုးကအပေါ်ထပ်မှာနေပါတယ်။ ကျွန်မအောက်ထပ်က ကက်ဆက်အကျယ်ကြီးဖွင့်ရင်ဆူပါတယ်။ ဟိုဘက်အိမ်တွေမှာလည်း အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေရှိပါတယ်။ ရေဒီယိုကခေတ်ဟောင်းတေးတွေဘာတွေလာတဲ့အချိန်ဆို လူကြီးတွေကနားခံသာပေမယ့် ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကခေတ်စားစပြုလာနေတဲ့ ရောခ့်ဂီတကို သူတို့မကြိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဆူဆူညံညံမကြိုက်တဲ့သူမို့ မဖွင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့မျက်စောင်းထိုးအိမ်က ကျွန်မနဲ့မတိမ်းမယိမ်းယောက်ျားလေးက အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး လိုက်ဆိုတတ်ပါတယ်။ သူတို့တအိမ်လုံးက ရပ်ကျော်ရွာကျော်တွေမို့ အနီးအနားက အဘိုးအဘွားတွေက ကျွန်မကက်ဆက်ဖွင့်ရင် မီးမီးရေ တိုးတိုးလုပ်ဟေ့လို့ ပြောသလိုသူတို့ကိုမပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိမှုက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်မကက်ဆက်ဖွင့်လို့ ဟေမာနေ၀င်းလို ခပ်အေးအေးသီချင်းလေးတွေဆို ဟိုဘက်အိမ်ကအဘွားရော၊ သူသမီး အန်တီသန်းရောက ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဆို မီးမီးရေကျယ်ကျယ်ဖွင့်ဟေ့လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မအဘကလည်း မဆူပါဘူး။ ကျွန်မကလည်း အခါကြီးရက်ကြီး ဥပုသ်နေ့မျိုးတွေမှာ မဖွင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပိုင်တဲ့ကက်ဆက် ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့် ဆိုပေမယ့် သူတပါးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်၊ သူတပါးရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း လေးစားရမှာပါ။ ကျွန်မကိုးတန်းလောက် ရောက်လာတော့ နားကျပ်နဲ့နားထောင်ရတဲ့ Walkman ကက်ဆက်လေးတွေ ခေတ်စားလာပါပြီ။ ကျွန်မ မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတဲ့ အဲဒီကက်ဆက်လေးထဲမှာအခွေတွေဖွင့်ပြီး ဘယ်သူမှမကြားဘဲ နားထောင်ရတဲ့ အရသာကိုကျွန်မအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်ဆစ်တို့ဘာတို့ ရက်ပ် အခွေတွေပေါ်နေပြီ။ ကိုယ်ကကြိုက်ပေမယ့် အဘိုး၊ အဘွားတွေဘယ်လိုမှကြိုက်မှာ မဟုတ်တော့။ ဒီကက်ဆက်လေးနဲ့ဖွင့်တော့ ကိုယ့်ကြောင့်သူများလည်း မထိခိုက်တော့၊ ကိုယ်နားထောင်ချင်တဲ့ ဂီတကို နားထောင်ချင်တဲ့အချိန်မှာ နားထောင်လို့ရတယ်လေ။ အိမ်မှာ ကျွန်မအကိုကလည်း သီချင်းအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကတော့ သူ့ဂစ်တာလေးနဲ့ ခပ်တိုးတိုး သူ့ဘာသာသူပဲဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ သူများတွေလိုအိမ်ရှေ့ထွက် ဂစ်တာတလုံးနဲ့အော်တာမျိုးလည်းမလုပ်။ အိမ်မှာလည်း ဆူဆူညံညံဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းမရှိတဲ့အတွက် ပါတ်ဝန်းကျင်ကချစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ဘွဲ့လွန်တက်ဖို့ ထွက်မလာခင်အထိကျွန်မနားလည်ထားတဲ့ လူအခွင့်အရေးကတော့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကို လေးစားလိုက်နာခြင်းပါ။ အဲဒီလိုကျွန်မနားလည်ထားတဲ့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ စိတ်သဘောထားတူ၊ ဘာသာတူ၊ ၀ါသနာတူတွေဆိုပြီး ကျဉ်းမြောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှမစဥ်းစားခဲ့မိပါဘူး။
နောက်ဒီရောက်လာတော့ ကိုယ့်လိုကျောင်းလာတက်တဲ့အကိုတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြရင်းကနေ ခရစ်ယာန်ဘာာသာအကိုတယောက်ကပြောပါတယ်။ လော်စပီကာတပ်ပြီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ်အလှုခံတာတို့၊ တညလုံးတောက်လျှောက်ပဌာန်းရွတ်နေတာတို့ သူလုံးဝမကြိုက်တဲ့အကြောင်းပါ။ သူက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ဘာသာထုံးစံမေတ္တာပို့၊ အန္တရယ်ကင်းပရိတ်ရွတ်တာကို သူနားမလည်နိုင်၊ လက်လည်းမခံနိုင်တာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုး တခြားဘာသာတွေကျမရတဲ့အတွက်လည်း မကျေနပ်တာပါ။ ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းကနေခဲ့တဲ့အိမ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဝိုင်းရံနေတဲ့ အိမ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ပဌာန်းရွတ်ကြတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆို ကိုယ်တွေလူငယ်တွေက အချိန်တန် အိပ်ပျော်သွားပေမယ့် လူကြီးတွေကအိပ်မပျော်ကြ။ အဲဒီတော့ပဌာန်းသံကိုနာခံပြီး တရားနာကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင် တခါမှမစဉ်းစားမိအောင် ကျွန်မညံ့ဖျင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကိုနဲ့စကားပြောမှပဲ ဘာသာပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဘက်ညီအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။ ဘာသာတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမပိတ်ပင်ပဲ ဘာသာခြားတွေအတွက်လည်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘဲဘယ်လိုပေါ်လစီမျိုးထုတ်ပြီး ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို ကျွန်မစဉ်းစားစပြုလာပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စဉ်းစားမိတဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာသာလေးခုစလုံး လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ဟိုဘက်ကတမျိုး၊ ဒီဘက်ကတမျိုး။ ဟိုဘက်ကလော်စပီကာနဲ့တမျိုးအော်၊ ဒီဘက်ကလော်စပီကာနဲ့တမျိုးအော်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာမလား။ (ဥပမာ အခုအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ ဘလော့တွေပေါ်မှာ အော်နေကြသလိုမျိုး။) ဘာသာလေးခုအပြင်အခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဂိုဏ်းခွဲတွေပေါ်လာပြီး မူရင်းဘာသာတွေကိုခြိမ်းခြောက်လာမလား။ ကျွန်မတို့ရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မည်သည့်ဘာသာမဆို အေးချမ်းလွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ လေ့လာနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ သွေဖယ်သွားမလား။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်မေးဖြစ်လာတဲ့ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘောင်အခွင့်အရေးဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ ပိုပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ဖို့ လိုလိမ့်ဦး မယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by Haymar at 9:48 PM 1 comments
Keeping Corruption လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတို့လည်းကူ
ဟိုတနေ့က World Bank ဘလော့တခုမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို လာဘ်ပေးလာဘတ်ယူမှုပပျောက်အောင် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ 5th Pillar လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့က ရူပီး သုညတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေစက္ကူထုတ်ပြီး ပြည်သူတွေက အဲဒီလာဘ်စားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အဲဒီငွေကြေးတွေပေးခြင်းအားဖြင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တိုက်ဖျက်တဲ့အကြောင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ သုညရူပီးကိုပေးခြင်း အားဖြင့်တသက်လုံးအစိုးရအရာရှိတွေလုပ်သမျှပြောသမျှ အများစုကခေါင်းငုံ့ခံလေ့ရှိတဲ့ အိန္ဒိယလိုနေရာမျိုးမှာ ပြည်သူတွေကလာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်ကို တကယ်ပဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုတာကို ပြသတာပါ။ ရေးထားတာကတော့အိန္ဒိယအနေအထား၊ အိန္ဒိယအကြောင်းအရာပါ။ (http://blogs.worldbank.org/publicsphere/paying-zero-public-services မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။) မြန်မာနိုင်ငံမှာရော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမရှိဘူးလား။ ဒီလို သုညတန်ဖိုးကျပ်ငွေထုတ်ပြီး ပေးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအောင်မြင်နိုင်မလား။ အရင်ဆုံးအိန္ဒိယကအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ မြန်မာက၀န်ထမ်းဘာကွာလဲ တွေးကြည့်ရအောင်။ အိန္ဒိယမှာအစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုအောက်ခြေ၀န်ထမ်းကစပြီး ထမင်းဝအောင်တော့ လခရပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းရာထူးမြင့်လာပြီး မြို့နယ်တခုလောက်က စာရင်းအင်းကိုင်တွယ်ရလောက်တဲ့ ရာထူးမျိုးဆိုရင် အိမ်မှာခိုင်းတဲ့တပည့်နဲ့ဘာနဲ့ တော်တော်အဆင့်မြင့်ပါတယ်။ (စစ်ဘက်နဲ့ ရဲဘက်ဝန်ထမ်းကို မဆိုလိုပါ။) ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာနိုင်ငံရေးပါတီကလည်းများ၊ နိုင်ငံအဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာ ဒီနေ့ရှိတဲ့ပါတီက နောက်နေ့ပြုတ်ရင်ပြုတ်သွားမှာပါ။ (လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီလောက်မမြန်ပါဘူး။ အပြောင်းအလဲမြန်တာကိုပြောချင်တာပါ။) အဲဒီတော့ ဗျူရိုကရက်လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကပဲ အမြဲတည်မြဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့တန်ခိုးအာဏာက တချို့နယ်မြေတွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထက် တောင် ကြီးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကိုကြည့်ပါ။ တခြားကိုမကြည့်ပါနဲ့။ လာဘ်စားလို့၊ ရုံးသွားရင်ပေးရ ကမ်းရလို့ ပြည်သူတွေအော်ကြတဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကိုပဲကြည့်ပါ။ ညွှန်မှုးလောက်အဆင့်ဆိုရင် သီတင်းကျွတ်ဆိုကန်တော့ရတဲ့ အစဉ်အလာတွေဘာတွေရှိတယ်။ တခြားအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပခုံးမှာ ၁ရစ်၊ ၂ရစ်၊ ၃ရစ်အဆင့်ရှိဝန်ထမ်းတွေကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်မကျန်းမာရေးစီမံချက်တခုမှာလုပ်တုန်းက လူကြီးကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဗီဇာသက်တမ်းသွားသွားတိုးရပါတယ်။ တခါသွားတိုးရင် (၂လတခါလောက်ပေါ့) ၅၀၀ကျပ်ပေးရပါတယ်။ တခါတလေကျွန်မကတထောင်ပေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တနေကုန်လာသမျှလူတွေဆီကတယောက် ၅၀၀ကျပ်စုပေါင်းပြီး ညနေဆို အဲဒီဌာနက လူတွေခွဲယူကြတာပါ။ (လူတိုင်းဆီကလည်း ရချင်မှရပါလိမ့်မယ်)။ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ မှန်ချင်မှမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဌာနအကြီးအကဲကိုတော့ ပိုပေးရမှာပါ။ တနေကုန်လို့ အဲဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရရင် ၁,၀၀၀ ကျပ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူတို့တယောက်ချင်းစီ လစာ ၄၀,၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ပါ။ အရစ်ကွာလို့ လစာကွာလှရင် ၃၊ ၄ ထောင်ပေါ့။ အများဆုံးရမှာကတော့ ဌာနကအကြီးအကဲပဲ။ ထားပါတော့။ ကျွန်မအဲဒီအချိန်ရန်ကုန်မှာ အဆောင်နေပါတယ်။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ လောက်ပေါ့။ အဆောင်ခ၊ ထမင်းစားရိတ်၊ သာရေး၊ နာရေး ပေါင်းလိုက်ရင် တလကို တသိန်းဝန်းကျင်ကုန်ပါတယ်။ တသိန်းထားပါတော့။ အဆောင်လခ တသောင်းနှစ်ထောင်ပြန်နှုတ်ရင် ရှစ်သောင်းရှစ်ထောင်က တခြားစရိတ်ပါ။ အဲဒီတော့တွက်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ လ၀ကသာမာန်ဝန်ထမ်း တယောက် ၄၀,၀၀၀ ရရင်၊ သူ့နေ့စဉ်ဘေးပေါက်ဝင်ငွေကို ၁,၀၀၀နဲ့တွက်၊ တလစုစုပေါင်းဝင်ပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ၀န်းကျင်။ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဆို တလ ၈၀,၀၀၀၀န်းကျင်ရပါမယ်။ အိမ်ထောင်နဲ့ကလေးနဲ့၊ မိသားစုရှိတဲ့ဝန်ထမ်းမျိုး၊ သူ့အိမ်ထောင်ဘက်ကလည်း သူ့လိုပဲ လခနည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လာဘ်ယူနေရတဲ့အနေအထားမှာတောင် ကျပ်တည်းနေဦးမှာ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမလုပ်ဘူးဆိုရင် ထမင်းကိုတနေ့နှစ်နပ်ကနေလျှော့စားဖို့ပဲ ရှိတော့မယ်။
ဒီလိုကျွန်မပြောလို့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုအားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာ တိုက်ကိုတိုက်ဖျက်ပစ်ရမယ့်၊ ဆန့်ကျင်ရမယ့်အရာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေအထားမျိုးမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေအကျင့်ပျက်တယ်။ လာဘ်စားတယ်အော်နေကြမယ့်အစား ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အစိုးရက ၀န်ထမ်းတွေကိုခဏခဏတော့ လစာတိုးပေးပါတယ်။ လစာတိုးတိုင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းက တိုးလာတယ်။ ပြဿနာရဲ့တစိတ်တပိုင်းကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်၊ ခံယူချက်တွေပါပဲ။ လစာတိုးတော့မယ် လို့သတင်းကြားတာနဲ့ ဈေးတော့တက်တော့မှာပဲဆိုပြီး ပိုက်ဆံအပိုရှိတဲ့သူတွေက ဆန်ဝယ်လှောင်တယ်၊ ဆီဝယ်လှောင်တယ်။ ၀ယ်လိုအားတွေတက်တာနဲ့အမျှဈေးတက်လာတယ်။ ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေက တက်လာတဲ့ဈေးနဲ့ လက်လီဝယ်စားရတယ်။ အဲဒီတော့အဓိကပြဿနာက ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပဲ။ အဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအနေအထား၊ ဘဏ်စနစ် စတာတွေပါလိုက်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုလစာတိုးပေးလည်း သူတို့ဘ၀တွေကအရမ်းတိုးတက်မသွားပါဘူး။ မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ နှစ်၂၀အတွင်းမှာ လစာကို အဆ ၇၀အထိတိုးပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့သလိုပဲ ငွေကြေးကပါလိုက်ဖောင်းပွလာတော့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ဘ၀ကတော့ တိုးတက်မလာပါဘူး။
အဲဒီတော့ပြောချင်တာက ၀န်ထမ်းတွေလာဘ်စားတယ်လို့ချည်းပဲ အော်မနေပါနဲ့။ မစားရင် သူတို့ငတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက်တော့ လုပ်ရတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တခုပါပဲ။ လာဘ်လဲယူ၊ အလုပ်လဲပြီးပါစေပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲ့တခေါက် ကွန်ဖရင့်တခုမှာ ကျွန်မအရမ်း လေးစားတဲ့ပါမောက္ခတယောက်က သူတင်ပြတဲ့စာတမ်းအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့လာဘ်စားမှု နဲ့ အလုပ်မဖြစ်တဲ့လာဘ်စားမှု ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောသွားပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြဿနာဟာရှိနေတုန်းပါပဲ။ အာရှမှမဟုတ် အနောက်ဘက် မှာတောင်လုံးဝကင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရနေတာပါ။ အဲဒီတော့လာဘ်ယူရင်ယူပါ။ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင် ပေးရတဲ့လာဘ်အတွက် အပြစ်မတင်ဘူး ဆိုတဲ့သဘော အဲဒီပါမောက္ခကပြောသွားတာပါ။ အလုပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ အိယောင်ဝါးနဲ့ လာဘ်စားနေရင်တော့ နိုင်ငံအတွက်အဆိပ်အတောက်အမှိုက်ပါပဲတဲ့။ ကျွန်မအဲဒီအဆိုကို ချွင်းချက်မရှိထောက်ခံခဲ့တာပါ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်မကိုယ်တွေ့ လ၀ကဌာနကိုပဲပြန်ဆက်ပါရစေ။ လ၀ကကလူတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အဲဒီစီမံကိန်းမှာ ၃နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှာ ခဏခဏအဲဒီဌာနကိုသွားရပါတယ်။ တခါဖောင်တင်မယ်ဆိုရင် ၅၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်။ ဗီဇာသက်တမ်းထိုးထားတဲ့ ပါတ်စ်ပို့ပြန်ရတဲ့အထိ ပေးစရာမလိုဘူး။ ကျွန်မအချိန်မရွေးဖုန်းဆက်မေး ချိုချိုသာသာဖြေပါတယ်။ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲ နေပြည်တော်ကိုဖုန်းဆက်မေးပေးပါတယ်။ ကျွန်မကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြန်ပြောပေးပါတယ်။ ဘယ်ရက်နောက်ဆုံးလောက်ရနိုင်မလဲ အကြောင်းကြားပါတယ်။ သူတို့ဌာနက ကျန်းမာရေးကိုင်တာတဖွဲ့၊ ရိုးရိုးအလည်အပါတ်လာတဲ့သူကိုင်တာတဖွဲ့၊ တခြားလည်းအဖွဲ့တွေခွဲထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် တလကို တခါအဲဒီအဖွဲ့ထဲကလူတွေပြောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လူပြောင်းလို့မှကျွန်မအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ မေးရင်မေးတဲ့အချိန်မှာ မပြီးသေးရင်တောင်ကျွန်မစိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေမျိုးကိုရပါတယ်။ တချို့ဌာနတွေလိုဖုန်းဆက်မေးရင် ဆူအောင့်ဖြေတာတို့၊ မပြီးသေးဘူးဆို ဂွပ်ခနဲဖုန်းချတာမျိုး ကျွန်မမကြုံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးသာ အစိုးရဌာနတိုင်းကအလုပ်လုပ်မယ်ဆို ကျွန်မတို့ပေးရတဲ့ လာဘ်ငွေ နည်းနည်းကိုကျွန်မတို့ဂရုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ (လွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။)
အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ လာဘ်ငွေလည်းပေးရသေး၊ အလုပ်ကိုလည်းအလုပ်နဲ့တူအောင်မလုပ်၊ ပြည်သူလူထုကိုပါ မထေမဲ့မြင်လုပ်လာရင်တော့ ဒီလိုအလုပ်မဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးကို လာဘ်ပေးပြီး အသက်ဆက်မယ့်အစား တနည်းနည်းနဲ့ဒီစနစ်ကဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ရမှာပါ။
လုံးဝလာဘ်ပေးလာဘ်ယူစနစ်ပပျောက်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ သိပ်မလွယ်လှသေးပါဘူး။ လျှော့နည်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ ပြည့်သူဝန်ထမ်းတွေလာဘ်မယူပဲ ရပ်တည်လာနိုင်မှဖြစ်မှာပါ။ လောလောဆယ်ငွေကြေးလည်း မဖောင်းပွအောင် လစာလည်းတိုးစရာမလိုဘဲ လုပ်လို့ရမယ့်နည်းတွေကတော့
၁) ဆန်၊ ဆီပေးတဲ့စနစ် (အိမ်ထောင်ရှိသူနဲ့ အိမ်ထောင်မရှိသူခွဲပြီး ဆန်လုံလုံလောက်လောက်ပေးဖို့ပါ။ သာမာန်ဆန်မျိုးဆိုရင်ပဲရပါပြီ။ သိပ်တတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုကပေါ်ဆန်းနဲ့လဲစားလိမ့်မယ်။ ဆီဆိုလည်း စားသုံးဆီလောက်ပေးနိုင်တာပဲ။ မိသားစုလုံလောက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့)
၂) ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ အစိုးရသက်သာဆိုင်တွေဖွင့်ပြီး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ခွဲတမ်းနဲ့ ရောင်းချပေးတဲ့စနစ်။ (အရင်တုန်းကလည်းလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်သာဆိုင်ကိုင်တဲ့လူကြီးတွေ ရောင်းစားတာနဲ့ကုန်ရော။ သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီး အဲဒီအတွက်ဝန်ထမ်းသတ်သတ်ခန့်ထား၊ အုပ်ချုပ်တဲ့ လူကြီးတွေကို မတူညီတဲ့ဌာနတွေကနေခန့်ထားတာမျိုး လုပ်ပေးရင်ရမှာပါ။ လုပ်ချင်စိတ်ကလေးပဲလိုတာပါ။)
၃) တနှစ်မှာ ၃ခါလောက် ကလေးပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုး။ (ဒီလိုရာသီအလိုက်ပေးတာမျိုးက လစာတိုးပေးတာလောက်တော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှာမဟုတ်ပါဘူး။)
ဒါတွေကဥပမာတွေပါ။ ကုန်ကျမယ့်စရိတ်၊ ပြန်ရမယ့်အကျိုးကျေှးဇေူးကိုတွက်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရဖြစ်နိုင်မယ့်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းမယ့် အစီအမံမျိုးကိုစဥ်းစားပြီး သေသေချာချာလုပ်ပေးနိုင်ရင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ဘ၀တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရဆီမှာအမှုထမ်းချင်တဲ့လူငယ်တွေလည်း များလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆိုရင် အတွေးအခေါ်အသစ်၊ စိတ်ကူး အသစ်တွေ အစိုးရဌာနထဲကိုရောက်လာနိုင်တာပေါ့။ ချက်ချင်းလက်ငင်းဝုန်းခနဲဆို ရွှေပြည်ကြီးကိုတည်ဆောက် လို့မရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့ တိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။
I readaWorld Bank blog about combating corruption in India by using zero-denominated note initiated by the organization called 5th Pillar. By giving out this note toacorrupted public service, the Indian people show their disgust over corruption. You can read the full detail here. http://blogs.worldbank.org/publicsphere/paying-zero-public-services
Having read this, I was thinking whether we can use the same strategy in Myanmar. Do you think we can do the same in Myanmar? Let’s see. In India, evenalow level public servant can earn up to the amount by which he can live. Their salary can cover most of their expenses. If one becomes an administrative officer inatown, he gets his own place as well as some servants. If he becomes here to province level, he might be treated likeaking. (I am not talking about the officers from military or police commission in India.)
Let’s turn to Myanmar where most of the low level public servants do not earn enough even for the food. Previously, I was working inapublic health project where my supervisors are foreigners. I used to go to the Immigration Dept in Yangon to extend their visa. I was asked to pay 500 Kyats (around 0.5 USD) for one-time service fee. I knew that they added up all the money from the visitors every day and divided among them. I think (not sure) the head of the dept might get more than others. I don’t think each officer get merely 1,000 Kyats per day. Except from the Director-level officer, officers at that dept got the salary ranging from 40,000 Kyats (around 40 USD) to 50,000 (around 50 USD). So, if one officer get 1,000 Kyats (under the table) plus the salary, his/ her total income will be 70,000 – 80,000 Kyats (estimated from 70 USD to 80 USD). I was staying inahostel then and I don’t have any dependants. My total expense for one month is around 100,000 Kyats (100 USD). If I deduct the hostel fee, 12,000 Kyats, other expenses will be 88,000 kyats (around 88 USD). Then, how an officer can haveaprosperous life with an income of around 80 USD? How can they leadapeaceful life if the officer marries the low-level public servant like him and has some children too? It would be difficult for them even to have two mealsaday if they didn’t take the money under the table.
I am not telling that CORRUPTION is good. It is something we should combat. Life will be pleasant without corruption. Social welfare will increase. But think about the root cause why the public servants are corrupted. They do not have enough income to cover their family expenses. The government frequently increases their salaries officially. But together with the pay rises, the price level goes up. The inflation becomes the biggest problem. Empirical evidence says that Myanmar is the only country in South East Asia where the government servant salaries are increased 70 times higher during 20 years. But the inflation associated with this pay rises have never been addressed properly. People expectations also contribute to inflationalot. When the pay for public servants is increased, they anticipated the inflation to be higher. Then, the people with extra money holdings buy rice, oil and other basic needs for keeping. Demand increases when the supply of the goods cannot increase inashort time. The prices go up. Then, the burden goes to the low-income families who cannot store things for the future and who has to pay for same price for reduced quantity as their wages do not increase inashort period. That has happening time after time and inflation never goes down. Hence, the main problem, like I said, is high inflation. To address this problem, the country needs economic reform and banking-sector reform which are costly and which cannot happen inashort while.
So please stop talking that public officers in Myanmar are immoral and corrupted. If they are not corrupted, they cannot survive. All people are fighting for their survival. Most importantly, we need to have the corrupted servants which do their jobs well. I still remember, inaconference,aprestigious professor talking about ‘productive corruption vs unproductive corruption’. Most of the Asia countries have corrupted bureaucratic structure. Even some in the west. But we need to acknowledge productive corruption in which the officers provide satisfactory service to the public taking the under-table money (or tea money.) In contrast, unproductive corrupted officers need to be kicked out of the system as they are just the holes through which the government’s budget and the society’s money are draining. Let’s talk about the Immigration Dept I used to go. In that Dept, there are different groups for different type of foreigners_ tourists, foreign government officers, embassy officers, foreigners related to Ministry of Health. The officers in each group are not permanent but they rotate internally. But regardless of with whom I worked with, I never had the difficulty getting my job done. Like I said, I had to pay 500 kyats (for one passport). Whenever I called their department to enquire about the application process, they never showed impatience. They answered politely, called to Nay Pyi Taw if necessary, called me back to inform the process and let me know by when I could possibly get the passport/s back. Even I had to pay 500 kyats, I got the satisfactory service. (I don’t know all the officers from Ministry of Immigration, Emigration and National Registration but I am talking about the officers I met at that department.) I know there are public officers who hang up on the public and are rude to the people and do not do their work effectively. But if all the public officers are like the ones from the Immigration Dept I mentioned, I think we should not mind paying forasmall amount. Just regard this asareward. (Feel free to disagree.)
If we want to address the problem of corruption in Myanmar, the only way is to make the public officers be able to live on their own income. There are some ways to improve the lives of public servants by changing their incentive structures. We need to change their incentives, meaning that they need to be better rewarded for their service. But this reward should come without inflation, like pay rises. Here are some examples.
1) Rationing rice/ cooking oil (To provide the public servants with some amount of rice and cooking oil differently to the singles and the marrieds)
2) Governments discount shops selling basic necessities to public servants (To haveaproper check-and-balances system unlike the ones we had before.)
3) Seasonal bonus or allowance for children’s education (Not to have the inflation effect like pay rises.)
We can use the most politically feasible strategy which benefits also cover the costs. Those are just the examples which can be used to improve incentive structure of public servants, reduce corruption and thereby increasing social welfare. And this will also attract some young people to enter public service. They might later provide creative and innovation ideas and the public service can even improve further. Withoutaneed to haveabig REFORM, we can still CHANGE BIT BY BIT for our country to be better.
The image is taken from Google Images.
Posted by Haymar at 9:42 PM0comments
ပေါ်လစီလေ့လာနေတဲ့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို မူလယဉ်ကျေးမှု၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ မပျောက်ဘဲနဲ့ တိုးတက်စေချင်တဲ့ လူငယ်တယောက်ပါ။
နိုင်ငံရေး ဘလော့လုံးဝမဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်များကိုပေါ်လစီနည်းဖြင့် ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကို ဉာဏ်မီ၊နားလည်သလို ရေးထားတာပါ။
Public Policy ဆိုတာဘာလဲ။
အများအားဖြင့် ပြည်သူလူထုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတခုကို အစိုးရက ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်း၊ ဗျူဟာ။ ဒီထက်သေးငယ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့တခုစီမှာ organisational policy၊ group policy စတာမျိုးအထိ ရှိပါတယ်။ policy နဲ့ law ရဲ့ခြားနားချက်ကတော့ ဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမရှိမဖြစ်ပြဌာန်းထားတဲ့ လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းဖြစ်ပြီး ပေါ်လစီကတော့ ပြဿနာတခုခုအတွက်ဦးတည်ပြီး ချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ပါ။ ဥပဒေကရေရှည်ဖြစ်ပြီး ပေါ်လစီအများစုကတော့ ကာလတိုအတွက်သုံးတာ များပါတယ်။